Wednesday, 15 Nov, 2017 7:19 AM
२९ कात्तिक ,काठमाडौँ। आधा खुला भएको भुइँतलाको सानो हलमा खचाखच कार्यकर्ता भरिएका थिए कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा। सुरक्षाकर्मीलाई भीड मिलाउन हम्मेहम्मे थियो। पार्टी जिल्लासचिव कपिल शर्माले कार्यक्रम सुरु गरे। कार्यकर्तालाई जिज्ञासा राख्न भने। मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापति किरण कोइरालासँग कानमा खुसुक्क भन्दै थिए, ‘केको जिज्ञासा छ र ? ऐले ढिला हुन्छ ? ’ कोइरालाले राख्न दिऊँ भन्ने इशारा गरिन्।
कार्यक्रम सक्दै उनले अन्तिममा भनिन् ‘पीर, दुःख तपाईं, हामी सबैलाई छ तर, त्यो भन्दा धेरै पीडा र दुःख त्यो बाम गठबन्धनले जितेपछि हुनेछ, त्यसैले जस्तोसुकै पीडा भए पनि यसपटक कांग्रेसले हार्नुहुन्न, म पनि लाग्छु तपाईंहरु पनि पार्टीलाई जिताउन लाग्नुस्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।